डान्सबारहरूको यस्तो हर्कत ! एउटा जुस खाएको ८ हजार रुपैया ? « Khasokhas Follow @khasokhasmag
प्रकाशित मिति : कार्तिक २१, २०७५ बुधबार
गत साता नयाँ बसपार्कको नमस्ते डान्सबारले एउटा जुस खाएको विल कसरी ८ हजार लिन्छ ? भन्ने देखाएका थियाँै । यति मात्रै होइन रेष्टुरेण्ट सञ्चालकले अवैध रेष्टुरेन्टबाटै देह व्यापार पनि गराउने गरेको देखायांै । जहाँ सञ्चालकले प्रहरीलाई समेत सेटिङ मिलाउनु पर्छ भनेका थिए ।